Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Chii chiri Kupisa Iyezvino muEye Wear ye2022
Chii chiri Kupisa Iyezvino muEye Wear ye2022
Inodhonza kurudziro kubva kune yayo 2022 Trends Chirevo uye inotengeswa zvakanyanya eyewear, mutengesi wepamhepo weDTC anofanotaura zvinopisa zvemaziso egore.
EyeBuyDirect yakafanotaura iwo epamusoro mashanu emhando yemaziso evatengi vachaona muindasitiri yemaziso gore rino. Mukutarisa mafuremu ari kutengesa-pamusoro uye nekudzvanya mune yavo yakamboburitswa 2022 Trends Report, zvinotarisirwa kuti vatengi vachakwevera kune mashanu chaiwo mafambiro gore rino:
• Revamped Neutrals: Neutrals yagara iri yekuenda-kune kana zvasvika kune eyewear. Yekutanga chena uye nhema yabuda, uye mapigment akapfava ndiwo matsva asina kwaakarerekera e2022, achibvumira ziso rako kusimudza chipfeko chako. Ingave iri creamy avocado, mafuta emuorivhi, kana muzinga wehuchi, tarisira kuona zvimwe zvipfeko zvemaziso zvine toni dzakapfava pamusoro pemafuremu akajeka, anopenya mumavara aya anove nemukurumbira gore rino.
• Mafuremu akashinga, epamusoro-soro: Zvivenge kana kuvada, magirazi ekitsi-eye akarongedzerwa kuti ave mutengesi wepamusoro we2022. Aya mafirimu eretro anouya mumarudzi akasiyana-siyana uye maumbirwo (mamwe akashinga kupfuura mamwe). Rudzi urwu rwezvipfeko rwemaziso runowedzera kupinza kumeso uye kubata kwakadzama kune izvo zvipfeko zvemazuva ese vatengi vari kuzununguka kubva kuhofisi yavo yekumba.
• Izvo zvekare zvinyowani zvakare (vintage): Nepo magirazi ekitsi-eye angave ari fashoni kune vakadzi, isu tichaona yakaenzana huwandu hwevatengi vechirume vachikwevera kune vintage eyewear gore rino. Aviators uye mafaremu ekufambisa nzira mbiri dzepamusoro dzatinotarisira, zvese mumalenzi emishonga uye magirazi ezuva. Mafiremu evintage ane hinge anotsanangura kana tortoise template matipi anounza kusashanda nguva kunozadzisa chipfeko chega chega - uye imwe yatichaona vatengi vachisarudza.
• Mutambo: Mitambo inosangana nehunhu mune iyi 2022 maitiro, sezvo vatengi vari kusunda miganhu yechinyakare 'yemitambo' nezvipfeko zvavo zvemaziso, tichaona aya emangwana, akaputira magirazi enhoo yemitambo achiwana mukurumbira. Iridescent gradients uye polarized lenses zvinotora seamless vatengi kubva mudare repickleball kuenda kumugwagwa, uku vachiwedzera dhizaini yedziviriro inodiwa.
• Kuverenga Magirazi ezuva: Vaverengi vari kuwana nguva yavo, nevatengi vakawanda vachitutirana magirazi akagadzika uye fashoni-mberi anopa rumwe rutsigiro rwekuverenga magazini kana kupuruzira misoro yemazuva ese. Sezvo mazuva achiwedzera uye tembiricha dzichiwedzera, vatengi vachange vachitsvaga vaviri vevaverengi kuti vaende kunze, saka tichaona magirazi ekuverenga achitanga kuita mumwedzi iri kuuya. Ingave yekutanga-tint, girazi-tinted (inovharira 10-60% kupenya kwezuva kwakawanda pane akajairwa tinted mafuremu) kana gradient-tinted ekuverenga magirazi ezuva, vatengi vachange vachitora zvipfeko zvemaziso izvi.
Kuvandudza Hupenyu hweMedicare Varwere vane Kidney Chirwere Iye zvino
New Taxi Campaign muMilan Ichiratidza Seychelles
Medical Nitroglycerin Sprays Market inotarisirwa ...
Nyika Dzakanakisisa-dzinoshamwaridzana neVadzidzi dzekushanya
Nyowani yekuferefeta podcast yakatevedzana pane kwakabva...